Soo Bandhigida Waxsoosaarka Tech | War gadget
Qaybta tikniyoolajiyadda aad ayey u nooshahay. Maalin kasta noocyada soo bandhig alaab cusub oo teknoloji ah inaad isku daydo inaad suuqa u gasho suuqa iyo macaamiisha. Laga soo bilaabo Actualidad Gadget waxaan kuu keenaynaa dhammaan wararka ku saabsan dhacdooyinka bandhigga ee dhammaan noocyada aaladaha.
Waxaad rabtaa si aad ula socoto waa maxay noocyada ay ka midka yihiin Samsung, LG, Sony, Apple, Xioami iyo kuwa kaloo badan oo jooga? Hagaag, ha moogaan qaybtaan. Waan kuu soo bandhigeynaa sawirro iyo fiidiyowyo gaar ah ay sameeyeen kooxdayada tifaftirka.
Wararkii ugu dambeeyay ee soo bandhiga alaabada
by Paco L Gutierrez samee Sannadka 1 .
In yar oo yar tirada laptop-yada cusboonaysiinta ku shaqeynaya jiilka cusub ee Intel waa ...
Amazon waxay soo bandhigeysaa Fire HD 8 cusub oo qiimo leh
by Miguel Hernández samee 2 sano .
Kiniiniyadu waa suuq umuuqda inay dhimatay, sikastaba ha ahaatee waxay wali leeyihiin xiise aad uxiiso badan oo dadweynaha ah, on ...
Poco F2 Pro: Shaashad badan, waxqabad badan iyo qiimo badan
Qeybta Xiaomi ee loo yaqaan 'Pocophone' ayaa timid labo sano ka hor suuqa Isbaanishka iyada oo la socota Poco F1, terminal in ...
Galaxy Note 10 iyo 10 + waa rasmi, horey ayaan u ognahay waxa Samsung nooga tagayo dhamaadka-sare ee cusub….
Stadia, barnaamijka cusub ee Google ee khadka tooska ah ee ciyaaraha, ayaa yimid
by Rafa Rodriguez Ballesteros samee 3 sano .
Waan ku dhawaaqi jirnay, waxay ahayd waqti uun ka hor inta weyn ee caasimada G ay xiiseyneyso ciyaaraha fiidiyowga….
Kani waa Tesla Model Y cusub oo cajiib ah
Waana taas kadib toddobaadyo yar kadib oo xitaa Elon Musk laftiisu ku daray shaki iyo kaftan ...
Huawei wuxuu bilaabay Huawei Y7 2019, taleefan casri ah oo loogu talagalay dhammaan jeebabka leh AI
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida soo saaraha Aasiya ee Huawei uusan u noqonin oo keliya mid kale ...
Waxaan isbarbardhigeynaa Samsung Galaxy Fold iyo Huawei Mate X
Toddobaadyo yar uun ka hor ayaanan ogeyn haddii sannadkani noqon doono sannadka isku laabidda taleefannada casriga ah. Xanta, mala-awaalka iyo inbadan ...
Kani waa Sony Xperia 1 cusub oo lagu soo bandhigay MWC
Sony waxay mar kale naga dhigtay inaan goor hore ka kacno dhacdada tixraaca taleefanka adduunka, MWC. Shirkadda ayaa bilowday ...
La kulan headphones-ka cusub ee Samsung Galaxy Buds
Waxaan haysannay 20-ka Febraayo oo lagu calaamadeeyay kalandarka muddo dheer. Maanta ugu dambeyntii waxay ahayd maalin Samsung, ...
Halkan waxaad si toos ah uga arki kartaa bilawga Huawei Mate 20 iyo 20 Pro
by Jordi Gimenez samee 4 sano .
Maanta waa maalin la bilaabayo ugu dambeyntiina waxaan awoodi doonnaa inaan si rasmi ah u aragno nooca cusub ee Huawei Mate, ...